बलिउडका यी सेलिब्रेटीका नाममा गिनीज वल्र्ड बुक रेकर्ड ! – Nepal Online Khabar
बलिउडका यी सेलिब्रेटीका नाममा गिनीज वल्र्ड बुक रेकर्ड !
भाद्र ९, २०७८ बुधबार 420
काठमाडौं : बलिउड फिल्मले नयाँ रेकर्ड बनाउँछ । चाहे यो बक्स अफिसको कमाई होस् वा थिएटरमा लामो समय प्रदर्शन भएर । फिल्मले रेकर्ड बनाएको छ नै बलिउडका सेलिब्रेटीले पनि बिभिन्न रेकर्ड बनाउने गरेका छन् । त्यो मध्य एक हो प्रतिष्ठित ‘गिनीज वल्र्ड बुक’ रेकर्ड । ‘गिनीज वल्र्ड बुक’ मा आफ्नो नाम लेखाउने बलिउड सेलिब्रेटी जसको चर्चा यहाँ गरिएको छ ।
Prevमुलुकभर थप २ हजार ४८२ जनामा को’रोना पुष्टि, ४४ जनाको मृ’त्यु !
NextExactly what isaBitcoin Trading Bot?
डेनमार्क दोस्रो चरणमा, रुस ४–१ ले पराजित
Tinder Ceo Renate Nyborg Is normally Rebuilding The Dating Iphone app For Gen Z
‘अफगानस्तिानमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था होस्’ !
राष्ट्रपति घानीले ४ वटा कार र हेलिकप्टरमा पैसा लिएर भागेको खुलासा !